के तपाई चिनियाँ अनलाइन सिक्न सक्नुहुन्छ?
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | Mar 17, 2021 | वेबमा
मन्डारिन चिनियाँसँग सिक्नको लागि गाह्रो भाषा भएको ख्याति छ मुख्यतया चरित्र र तिनीहरूको उच्चारण को कारण, प्रसिद्ध टोनहरू। सत्य मा, यो अर्को भाषा सिक्न भन्दा चिनियाँ सिक्न को लागी कुनै गाह्रो छैन, यदि तपाईं एक राम्रो जग संग शुरू र सही उपकरणहरु को उपयोग भने। आउनुहोस् हामी यहाँ के फरक संसाधन र विधिहरू छन् जुन तपाईंलाई अनुमति दिन्छचिनियाँ अनलाइन सिक्नुहोस्.
चिनियाँ, वेबसाइटहरू, एक शिक्षकसँग पाठका लागि प्लेटफर्महरू सिक्नका लागि अनुप्रयोगहरू। केही स्रोतहरूले तपाईंलाई बहु भाषाहरू सिक्न अनुमति दिँदछ, अन्य केवल मेन्डारिन चीनियाँमा समर्पित छन्।
चिनियाँ कसरी सिक्ने?
कुराको मुटुमा पुग्नु अघि, र यी संसाधनहरूको बारेमा ठीक कुरा गर्ने चिनियाँ अनलाइन सिक्नुहोस्आउनुहोस्, मन्दारिन चिनियाँका केहि विशेषताहरू हेरौं।
चीनियाँ टोनल भाषा हो। मेन्डारिन चीनियाँको जटिलता ठूलो स्वरमा आउँदछ जुन भाषालाई विशेष ध्वनि दिन्छ। समान चिनियाँ शब्दले प्रयोग गरेको टोनको आधारमा पूर्ण भिन्न अर्थ लिन सक्दछ। उदाहरण को लागी, mā को अर्थ आमा भनेको उच्च र समतल स्वरको साथ उच्चारण गरिन्छ र mǎ, घोडा अलि अलि पछि बढ्दै गरेको आवाजको साथ। तपाईंले तुरून्तै टोनको महत्त्व देख्नुहुनेछ
के तपाई चिनियाँ अनलाइन सिक्न सक्नुहुन्छ? जुन 29th, 2021Tranquillus
रिड डिजिटल पेशाहरू भोलिको संसार आविष्कार गर्न
अघिल्लोकसरी एक पेशेवर पाठ को सही प्रूफरीड गर्ने?
निम्नगतिशीलता मार्फत एकीकरण: ब्रिजिट क्लिन्कर्टले रोजगारबाट टाढा भएका व्यक्तिहरूको लागि लघु creditणको लागि समर्थन बढाउने घोषणा गर्‍यो।
MOOC तिनीहरूले कला बनाउँछन्
स्वतन्त्र: कसरी अधिक उत्पादक हुन?
फुटेका युवाहरूको लागि युवा संलग्नता सम्झौता - प्रेस निमन्त्रणा संक्षिप्त बन्द
Ardennes विभाग को लागि Brigitte Klinkert द्वारा यात्रा